တရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Xiaomi Mi Mix 2s! – AsiaApps
တရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Xiaomi Mi Mix 2s!
March 28, 2018 March 28, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on တရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Xiaomi Mi Mix 2s!
Xiaomi ဟာသူ့နောက်ဆုံး Flagship တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mi Mix 2s ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ကပဲ ရှန်ဟိုင်းမှာတရားဝင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆက်သွားပုံ အစ/ အဆုံး Live ကိုတော့ အောက်ပါ ဗီဒီယိုကနေကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
Mi Mix 2s ရဲ့အရွယ်အစားဟာ ၅.၉၉ လက်မရှိနေပြီး 18:9 FullHD display ပါဝင်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကို Gorilla Glass4နဲ့ကာကွယ်ထားပါတယ်။ Mi Mix 2s ရဲ့ ပြင်ပအနေအထား ဒီဇိုင်းအပိုင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Mi Mix2နဲ့ကွာဟမှုမရှိသလောက်ပါပဲ။
မဟုတ်ပါဘူး… Processor အပိုင်း၊ Wireless Charging ပါဝင်လာမှု၊ Dual ကင်မရာဖြစ်လာမှု အစရှိတဲ့ ၃ မျိုးကတော့ သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
Mi Mix 2s ရဲ့Processor ပိုင်းဟာ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 845 chipset အသုံးပြုထားပါတယ်။ (Mi Mix2မှာတော့ Snapdragon 835 chipset သာအသုံးပြုထားခဲ့ပါတယ်) Processor ပိုင်းအမြင့်ဆုံး အသုံးပြုထားသလို GPU ကိုလည်း နောက်ဆုံးမိတ်ဆက်ထားတဲ့ Andreno 630 အသုံးပြုပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Mi Mix2တုန်းက မပါခဲ့တဲ့ Wireless Charging System ကိုလည်း Mi Mix 2s မှာထည့်သွင်းမိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ (Wireless Charging System ကိုအသုံးပြုနိုင်သလို Wired Charging System နဲ့လည်းအားသွင်းနိုင်ပါတယ်။) Wireless Charging System ပါဝင်လာပေမယ့် ဘက်ထရီသက်တမ်းကတော့ Mi Mix2တုန်းကလိုပဲ 3400mAh ဖြစ်ပါတယ်။
ကင်မရာပိုင်းကတော့ single camera ကနေ dual camera အထိကိုပြောင်းလဲသွားတာပါ။ အနောက်ဘက် Dual ကင်မရာဟာ 12MP ရှိနေပြီး Dual pixel auto-focus ပါ ပါဝင်လာတာကြောင့် ရိုက်တဲ့အခါ တည်နေရာ Focus ယူရတာပိုမိုလွယ်ကူသွားမှာဖြစ်သလို အလင်းရောင်နည်းနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေမှာပါ ရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားလို့ရပါတယ်။
Finger print system ဟာ Dual ကင်မရာအောက်မှာတည်ရှိနေပြီး Headphone Jack မပါဝင်ပါဘူး။ (ဒီနှစ်ခုလုံးက Mi Mix2နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တာကြောင့် သိပ်ပြီးတော့မထူးဆန်းလှပါဘူး။)
Mi Mix 2s ကို 6GB RAM (သို့) 8GB RAM, Storage ပိုင်းကို 64GB, 128GB, 256GB သုံးမျိုးတည်းက မိမိအသုံးပြုမှုအပေါ်မှုတည်ပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ရှန်ဟိုင်းမှာမိတ်ဆက်တုန်းက စျေးနှုန်းကိုတော့ ¥3299 (ယွမ်) ဖြစ်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ (မြန်မာငွေနဲ့ဆို ၇ သိန်းကျော်ကျော်လောက်ရှိပါတယ်)၊ ¥3299 ကတော့ RAM နဲ့ Storage အပိုင်းကိုလိုက်ပြီးအပြောင်းအလဲရှိနေမှာပါ။ Mi Mix 2s ကိုတော့ တရုတ်ပြည်မှာ စတင်ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပေမယ့် ကျန်တဲ့နေရာဒေသတွေကိုတော့ ဧပြီလထဲမှာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ကံမကောင်းစွာနဲ့ U.S ကိုတော့တင်ပို့မှာမဟုတ်ပါဘူး)… အမည်းရောင်နဲ့ အဖြူရောင်စတဲ့ Color option နှစ်မျိုးနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာပါ။
မြောက်အမေရိကန်မှာ တရားဝင်ရောင်းချမှုကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ OnePlus 5T
“BFF” လေးစိမ်းသွားရုံနဲ့ သင့် Facebook account လုံခြုံပြီလား??